Yazi umlando ukuze uqonde i-ajenda ye-UN 2030: UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-4 December 2019	• 14 Amazwana
I-intanethi isilethele imininingwane eminingi kangangokuba isishintshile isuka emthonjeni wolwazi ukuzwakala kahle. Njengoba i-TV iguqulwe isuka ekufundiseni iye kwi-wine ne-chip ukuzijabulisa, iqediwe nguJohn de Mol & co; Isibonelo, kulezi zinsuku imithombo yezokuxhumana imayelana namavidiyo ajabulisayo futhi ahlekisayo nokubuka okwenziwa abangane bakho ku-Instagram. Ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu ukuthi kube nezithombe namavidiyo amahle agxilisa i-ego ukwedlula ukuthi abantu basaqhubeka nokuthola ulwazi lwangempela.
Kokubili imidiya kanye nabezindaba zenhlalo konke kumayelana nokuzwa okuhle. Uma okuthile kuzwakala njengokugeza okushisayo, uthola ukuzonda labo bantu abaphonsa amanzi eqhwa kuleyo geza. Lokho kuyokwethusa. Noma kungahle kudingeke, ngoba umhlaba ongaphandle kwalelo geza lokufudumele mhlawumbe awuncane futhi umnandi kunalokho esikucabangayo, singathanda sikhethe amanzi okugeza afudumele. Imidiya emidala esunguliwe kanye neziteshi ezinkulu zokuxhumana kwesinye isikhathi kusinika izindaba ezimbi, kepha lokho kungena empompini wamanzi ashisayo ngakho-ke akukuphazamisi ukuthokozela.
Sifuna indlu yethu ihle futhi ibe ntofontofo futhi sifuna ukukhombisa abangani bethu amagajethi wakamuva, amaholide, izindlela zokuthola izimpelasonto nakho konke lokho kwabezindaba zokuxhumana ukuze babone ukuthi sijabule kanjani. Kwesinye isikhathi abanye baba nokuphila okunethezekile, kepha inqobo nje uma bethanda amafilimu ethu, sinokuxhumana neqembu. Ngubani osalinde 'iqiniso'. Yini leyo vele? Kunemithombo eminingi kakhulu. Omunye usho lokhu futhi omunye usho lokho. Kungcono kakhulu ukuhlala emfuleni wamanzi afudumele futhi ube nethemba. Abantu abagxekayo banjengamanzi abandayo okugeza okufudumele. Labo bantu banenkinga yayo yonke into esingazicwilisa kuyo ngobuhle. Labo ngabantu abangalungile. “Vuka? Yimise. Ngisendaweni efanele.
Ngakho-ke uma umuntu onjengoMartin Vrijland esho okuthile, uyakusakaza ngaphambi kwesikhathi. Ibutho lezokuxhumana elisebenza kwezenhlalo lisebenzise isu elijwayelekile lokushaya phansi phezulu kuzo zonke izinkundla nezingxoxo ezenziwa online. Amagama anenkokhelo engemihle axhumeke ku-Vrijland ngaphandle kokucaciswa futhi awufuni ukuba yilungu lalelo qembu. Awubheki okuqukethwe. Uma kungathiwa kumablogi noma kwizithangami ukuthi i-Vrijland icabanga ngobuqili bokuphanga, uthatha lokho ngokweqile. Cha, akayena: yizindima zombuso ezingemuva kwalomkhankaso. Isikhathi sokuyibona. Masiqhubeke futhi sibhekele okuqukethwe! Uyazi ukuthi yini. Okokuqala phuma ebhavini lakho elifudumele, gqoka ngokufudumele bese uthatha isiphu samanzi amasha futhi ahlanziwe. Lokho kukwenza uzizwe ungcono.
Kuyasiza ngempela ukuqonda amaphuzu ambalwa abalulekile empilweni. Impilo akuyona nje ukugeza okufudumele. Uma ume ephathini esikebheni esihle futhi udlala ibhendi, umuntu okhipha wena ehholo lokudansa iqhawe lakho uma kunomgodi ophakeme we-Titanic? Uma umi emgqeni wesitimela unamalebe akho ukuze ulalele umculo wakho owuthandayo futhi awuzwe isitimela siphuthuma kusuka ngemuva kwakho; Ingabe lowo okucindezela phansi ethrekhi ukukuvikela kunomsindisi wakho? Uma ubona ukuthi usindisile impilo yakho, uyajabula yini ukuthi ukhishwe endaweni yakho yokududuza? Uma bonke ababukele beqopha izingcingo zabo ngama-i-phone abo uma uhlaselwa, ujabule yini ngalabo abavela ngaphandle kweqembu abeza bezongenelela? Kuyinto okuhle ukuxwayiswa ngesikhathi. Kuyinto okuhle uma umuntu engenela. Wena bent empeleni i-optimist futhi kuhle kakhulu uma kwesinye isikhathi uqaphile. Kungasindisa impilo yakho.
Uma uzothandana noma ungene ebudlelwaneni, okokuqala ungathanda ukwazi kabanzi ngomuntu. Lapho uqala ukusebenzela inkampani, imvamisa ufuna ukwazi ukuthi ngabe uzizwa usekhaya lapho. Sekukonke, sithanda ukwazi kabanzi ngalabo esangena nabo ebudlelwaneni besikhathi eside. Umbuzo uthi ngabe wake wababheka yini labo esesivele sinobudlelwano besikhathi eside; lowo sakhuliswa naye. Uma ingane izalelwa ejele, ukuphela kwento eyaziyo ngejele. Uma kukhona izinto zokudlala kulelo jele, kungukuphazamisa okuhle nokuzilibazisa. Ngabe ubukeka kanjani umhlaba wangaphandle? Uma ujwayela izwekazi lapho wakhulela khona, lokho akusho ukuthi ubona isithombe uqobo. Uhlale uyibona kusuka ngaphakathi. Yebo, kungenzeka ukuthi uhambile futhi uyazi amazwe amaningi, kepha umbuzo uwukuthi isithombe sakho somhlaba sidwetshiwe kanjani. Ukuqaphela ukuthi lokhu kufakwa umbala sekuvele kwenziwa kusukela ekubumbeni nokuthi umbono wakho wezwe ufakwe imibala yimfundo, abezindaba nezepolitiki, kuyangena. Uzizwe ukhululekile ebhavini elifudumele olaziyo.
Kuthiwani uma lelo bhubhu elishisayo liqhathaniswa nebhendi kwiTitanic? Kuthiwani uma ugcinwa kwimodi yokuzijabulisa ukuze ukhexe kahle? Kuthiwani uma uqala ukubona ukuthi izinto eziningi ozifundile azilungile? Yebo, ngiyaqonda ukuthi ngokushesha ucabanga ukuthi: “Yebo, uyazi ngani ngalokho? Ngubani othi imithombo yakho ilungile. Ngincamela ukukholelwa amaqiniso asemthethweni aqinisekisiwe ngokwesayensi asekelwa ohulumeni nochwepheshe. Awusoze wakuhlola konke lokho ngokwakho. Asinalo ulwazi lolo. ”Ngiyayiqonda imicabango yakho, kepha nokho kunjalo kukufanele impela ukuthola ukuthi ngabe leso sitimela sikgijimela kuwe yini. Kuyinto kukufanele impela ukucisha umculo we-trance kusuka kuma-headphones akho bese ubheka amahlombe akho. Kuyinto kukufanele impela ukugijimisa isondo usuka ekushisekeni kwempilo lapho umkhumbi wenza amanzi.
Ngakho-ke ake sibheke emuva bese sibona okwenzeka lapho. Uthatha inkathazo. Ngemuva kwakho konke, ukubheka ngaphezulu kwamahlombe kumane nje kuwukuhlwitha. Sihamba isikhashana yenza umzamo wangempela. Kuyathakazelisa ukubona ukuthi ngubani ofake umbala wakho emhlabeni futhi uqonde ukuthi ubuhlale unikezwa ngamanzi afudumele. Kuyathakazelisa ukuthola ukuthi uGeorge Orwell walwa eMpini YamaSpain yaseSpain futhi wathola ukuthi okuhlangenwe nakho kwakhe kuleya mpi kulethwe kuhluke ngokuphelele ngakwikhaya langaphambili kunalokho ayekubona. Kuyajabulisa ukuthi le ndoda ibhale le ncwadi i-1984, lapho ikhuluma khona "ngokulungisa iqiniso". Kuyaqhubeka nje kunokuchaza ezinye izici zalokhu kuxhashazwa kwendatshana ye-1, ngakho-ke ngikucebisa ukuthi uphenye. Phenya ukuthi isayensi kanye ne-mlando kutholakala kanjani emandleni. Kuliqiniso sibili ukuthi ososayensi bezulu abakwenza umsindo ohlukileko bayabekelwa eceleni? Ja, kubukeka kanjalo. Kuliqiniso yini ukuthi umlando wezomlando ungaphansi kokukhwabanisa kanti uWinston Churchill uthe, "Umlando ubhaliwe ngumnqobi"? Ja, kubukeka kanjalo.
Kuthiwani uma uthola ukuthi izehlakalo ezinkulu zomlando ziye zalawulwa? Ah, yebo sengiyabona ukusabela kwakho. Uma ngabe le nkulumo-nqubo ibinamandla amashumi eminyaka ikwazile ukupenda isithombe esihlukile sangempela ezizukulwaneni ngezizukulwane? "Yebo, kodwa-ke abantu ngabe basukuma ngubani obekhulume okuthile ngakho?" Yebo, kunjalo-ke! I-TV kuphela, iphephandaba, uFacebook abonisa lokho abafuna ukukubona. Iqiniso ngemuva kwesihlungi sokucwaninga. Imvamisa ohulumeni basebenzisa i-pawns ethatha le ndaba bese uyixhumanisa neqembu eleqisayo. Ngale ndlela ungakukhipha kalula ukugxekwa emphakathini, ngoba uma unayo yonke imidiya ephaketheni lakho, uphethe umbono wabantu. Sizokwenza ngendlela ehlukile.
Ngiphakamisa ukuthi uhlole izindaba ezilandelayo. Ibhlokhi yamandla uLenin (kanye nomlandeli wakhe uStalin) abasize esihlalweni esibuhlungu iyindawo efanayo namandla u-Adolf Hitler asiza kuyo edabukisa futhi impi yezwe yokuqala neyesibili yahlelelwa ukudala isiyaluyalu ukuze kwakhiwe uhleko olusha. Lokho kungomlomo. Qhubeka.
Empini yezwe yokuqala, izwe laligcinelwe izwe lakwa-Israyeli Isitatimende saseBalfour. Ku Isivumelwano se-Haavara kusukela ku-1933 ukufuduka kwamaJuda kuya ePalestina kwase kubhaliswe neJalimane. Isizwe sakwa-Israyeli sasungulwa ngemuva nje kweMpi Yezwe Yesibili. Impi Yezwe Yesibili yadlala indima ebalulekile kulokhu.
U-Adolf Hitler ofanayo obesola ukuthi wayezonda amaJuda futhi ewahlelela ngokuhlelekile futhi efuna ubumsulwa, i-150.000 yayinamaJuda ayihafu nengxenye emabuthweni akhe, iningi lawo njengabaphathi bempi. Wayenejenerali okungenani ama-15 ama-jenerali kanye nabaphathi bawo, namanye amaJuda ayishumi nambili ezikhundleni eziphezulu ezifanayo. Isibonelo esihlaba umxhwele kakhulu yileso seStage Marshal Erhard Milch, umphathi wesibili kaHermann Goering. UMilch wadlala indima ebalulekile ekumiselweni kweLuftwaffe. UMilch wayenobaba ongumJuda futhi kungenzeka nokuthi wayengumama ongumJuda.
Kunemisindo eminingi yokuthi isithombe sezibuko, esibizwa ngokuthi yi- 'holocaust', siyindaba esekela inkulumo-ze, esekelwa ubufakazi obuqanjiwe. I-Cognitive dissonance yenzeka ngokushesha lapho ucabanga ngayo. Ulwazi oluhlukile luzwakala njengengilazi yamanzi abilayo kubhavu ofudumele. Ngabe ufuna ukususwa ebhendi ye-Titanic uma umkhumbi ucwila? Yebo, mhlawumbe.
Ukuze ihhashi ezisezinqeni kubalulekile ukuba nama-blinder kulo, ukuze angaphazanyiswa kakhulu emsebenzini wakhe wobugqila. Kumuntu kubalulekile ukukhipha izimpumputhe futhi uthole isithombe esihle sezwe elibazungezile. Lapho-ke ungalindela ikusasa. Ukuqaphela inkohliso emlandweni, kwenza kutholakale ukuthi bekulokhu kungukubizwa kwamandla okufanayo okudlalwa yizixuku. Siza isitha esizidalele esihlalweni sobunzima ukudala isiyaluyalu. Lokhu kukusiza ukufeza izinhloso eziphakeme. Kuthiwani uma lelo bhulokhi lamandla lasiza u-Adolf Hitler ekwenzeni iqembu labantu laba yisisulu futhi wakwazi ukubanikeza isimo sokungakwazi ukuzivikela? Kungani u-Adolf Hitler azungeza nabantu bozalo lwamaJuda uma efuna ukubakhombisa bonke? Bheka ukuthi ngubani oweseka uHitler ngezimali. Kulesi webhusayithi nakwisigcini sezinqolobane uzothola okuningi uma usebenzisa inkambu yokusesha. Okunye ukuqala okuhle ngokwesibonelo lesi sihloko. Thatha inkathazo ukuze uchofoze okuqukethwe futhi ukufundisise.
Kungekudala ngemuva kwempi yezwe yesibili kwaqala kwamiswa isizwe esiqeshini somhlaba esasivele sigcinwe esimemezelweni seBalfour phakathi nempi yezwe yokuqala (izwe lakwa-Israyeli). I-United Nations nayo yasungulwa. Umbuzo manje uthi: Ngabe konke lokhu bekuhlelelwe isikhathi eside? Umbuzo omkhulu okufanele uzibuze wona uthi: Ngabe uyawubona umthetho wasendulo waseRoma othi "Order from Chaos" kuzo zonke izimpi ezinkulu? Ingabe uHitler wayeyisitha esiyingozi esizenzele ngokwakhe eyanikeza ama-Allies u-alibi ukuthi aqhume i-Europe flat futhi akwazi ukufaka i-oda elisha kusukela kulolo dlame? Ngabe uHitler wayengamandla okuqhuba ngemuva kokuphambukela kwabantu ezweni lakwa-Israyeli? Qhubeka ufunde.
Isikhulu sethu uqobo uBernhard wayengamandla okuqhuba ngemuva kokusungulwa kweqembu le-jpg. Iqembu le-jpgberg lasungula isisekelo somphakathi waseYurophu. Umongameli wokuqala waleso EC wayengummeli ngaphansi kuka-Adolf Hitler. Igama lakhe kwakunguWalter Hallstein.
Ngiyaqonda uma ucabanga:Lokho kuyilungelo eleqile. Ngizwa uBrexit, abalandeli beNexit. Ngizwa u-Themry Baudet". Lowo mfanekiso udwetshwe yimidiya efanayo nangamaqembu ezepolitiki. Bazama ukuxhumanisa konke ukugxekwa komlando osemthethweni kanye nesayensi esemthethweni nalokho okwakhiwe ngokucophelela 'uphawu'.
Uma siqala ukubona ukuthi sidlalwe amashumi eminyaka yibhlokhi lamandla afanayo, khona-ke siyabona ukuthi sifakaza umbhalo lapho izimpi zahlelwa futhi zenziwa khona ngokohlelo. Siyaqaphela futhi ukuthi kuhlelwa impi yezwe nokuthi nayo iyingxenye yalowo mbhalo omkhulu. Futhi uma sesikubona lokho, singabona ukuthi yomlando nomlando wesayensi kungamagama amakhulu aqhakanjiswa ngabezindaba nabezindaba zenhlalo. Lokhu kungenzeka kuphela ngoba i-block endala efanayo inokulawula okugcwele kwimithombo yakho yokugeza eshisayo. Ngabe umbono wakho womhlaba udwetshwe ngabaphathi bokuqonda be-block efanayo yakudala?
I-Ordo ab Chao
Ngaphezu kweqiniso lokuthi enye impi ihlelelwe (impi yokuthi i-Jerusalema iqonde), ukuguquka okukhulu kwamandla ku-ajenda esikhathini esifushane njengesigaba esiphakathi kuleya mpi enkulu yokugcina. Lokhu kuguquka kwamandla kuzosho ukuthi i-US izokuwa ngokwezomnotho futhi mhlawumbe ibuye ihoxe kwi-NATO ngenxa yokungavumelani okuningi. Besivele sikubona ukuthi ukungaboni ngaso linye kubonakaliswa kukhonkolo izingxoxo izolo. UDonald Trump no-Emanuel Macron balinganise kakhulu umehluko wabo phakathi kwengqungquthela ye-NATO eLondon.
Ngenkathi ukwehla kwezomnotho e-US kungenzeka kuholele ekwehlisweni (okuhleliwe) kweTrump, isikweletu seBrexit sizoba se-Europe ngomnotho wase-Europe. Ngenxa yokuthi osopolitiki nabezindaba baxhumanise laba bezepolitiki nomkhiqizo owakhiwe ngokucophelela (kwesokudla) ngezinhlamba ezakhiwe ngokucophelela, isimo esibucayi kanjalo somnotho singanikeza ithuba lokuqhubeka komhlaba kanye nokuxazululwa ngemibono ephambukayo. Ngakusekela futhi lokho lesi sihloko nakwabanye abaningi. Ungakufunda lokho futhi.
Enye yezinhlamba ezihlotshaniswa nalelo qembu (elibhalwe ngokucophelela ama-wing hand) yilelo elithi 'abenqaba isimo sezulu'. Ngokunokwenzeka kuzongezwa ukuthi leli qembu limelele izintshisekelo zezimboni ezinkulu ezindala, njengesizathu sokunqabela ukufudumala komhlaba. "Babenakekela izintshisekelo zomkhakha wamafutha nezimayini zamalahle"Kuzoba nengxabano ezothathwa esitebeleni. Futhi-ke, ngokuhlanganiswa kokuwohloka komnotho nokubandlulula, indlela iyavulelwa ekugcineni yokuthi ibhekane nokugxekwa kwe-ajenda ye-UN eyake yahlelela i-2030 (owangena esikhundleni se-ajenda 2021).
Ukubikezela kwami ​​ukuthi iTurkey izoba yi-superpower entsha ezonqoba iYurophu. Lokho kuzoba lula ngokwengeziwe uma ukuwa (kokuhleleka) kokuwohloka komnotho kuza e-US bese uTrump enquma ukuthi kuzobiza kakhulu ukuhlinzeka ukuvikela iYurophu ebhekene nobunzima (ngamasudi akhathazayo afana neMacron ibiza iNATO ngokuthi 'ukufa kwengqondo'). Uma iYurophu iphahlazeka ngokwezomnotho (ngenxa yalokho, phakathi kokunye, isivumelwano seBrexit esihleliwe), kuzoba yinkinga eyengeziwe ukukhwehlela leyo minikelo ephezulu kwisabelomali seNATO. Ngakho-ke kunethuba elihle lokuthi i-US izobe isisusa izandla zayo eYurophu ukuze idale indawo yalokho ebengikubikezela lapha iminyaka: ukuvuswa koMbuso Wase-Ottoman. ITurkey ingangena ekuphepheni kwamandla uma iYurophu igcina iziphithiphithi futhi ingasebenza njengomsindisi wenkinga eyenziwe ngamabomu.
Futhi ngakho konke ukuguqulwa kwamandla nokushintshwa kwezepolitiki uzobona ukuthi umgwaqo ofanayo uhlala udlulwa. Ungacabangi manje ukuthi lapho u-Erdogan ethatha amandla, masinyane siba yi-Islamic Europe eqine. Cha, sizobona okuphambene. Sizobona ukukhululeka okufanayo kwe-Islam esikutholile kubuKristu. Ibhlokhi lamandla elisha i-Europe elizolithatha lizomane lithathe i-ajenda yemvula. I-ajenda yemvula engichaza encwadini yami: umgwaqo oya ekuphathweni komhlaba kweLuciferian, lapho zonke izinkolo zomhlaba nazo zizohlanganiswa khona. Nakisisa imibala yombala wesizulu logo.
Lokho uthingo luvelele futhi kuwuphawu lwe-oda lomhlaba omusha. Futhi yize iTurkey izohola ngokuqinile eYurophu, ayisoze yalulaza umgwaqo oya ekuhlelweni komhlaba omusha. Kodwa-ke, izokwethula amandla amakhulu asanda kudalwa azosiza ukuqalisa iMpi Yezwe Yesithathu. Angiyinaki leyo esikhwameni sami. In lesi sihloko Ngichaza ukuthi leyo-ajenda yayivele isephepheni kanjani ku-1871. Kuleyo mpi yokugcina (okuzoba ngeJerusalema), lowo mbuso wama-Ottoman uzovukela i-US ne-Israyeli. Lokho kudala izinxushunxushu zokugcina zokugcina amandla enkonzo empeleni ibheke ku-UN.
Ngaphandle kokuthi umzabalazo odingekayo uzokwenzeka futhi kuqubuke izinxushunxushu ezidingekayo, njengamanje ukunyakaza kwezepolitiki kuzothola amandla okuqhubeka nokucindezela i-ajenda ye-UN 2030, yize bekukhona konke lokhu kungabibikho. Leyo-ajenda imele izinyathelo ezinqala okufanele zivikele imvelo, kepha empeleni zibe nomgomo wokwenza yonke into ilandeke 'kwi-inthanethi yezinto' nokwakha iwebhu yokulawula yedijithali elandelela wonke umuntu nganoma yisiphi isikhathi noma kuphi. Ngachaza kabanzi lokho lesi sihloko. Ngakho-ke kungakuhle ukuthi uyifunde futhi.
Kuthatha umzamo othile ukusuka kude nemisindo ekhangayo yebhendi eku-Titanic bar bese ulibangise kufloor yempilo. Kufanele wenze okuthile ngalokho.
Uyacelwa futhi ukuthi ubheke i-ajenda 2030 ubheke iso kwiwebhusayithi yami ukuze ubone ngaso sonke isikhathi ukuthi yiziphi izentuthuko ezifaka isandla ekuqalisweni kwale-ajenda. Kuvuliwe le website Uzothola incazelo enhle yalelo hlelo lwe-2030. Kuhle futhi ukuthi ufunde incwadi yami. Lapha ngichaza ukuthi uthingo kanye nokungathathi hlangothi ngokobulili kudlala indima ehamba phambili kumbhalo we-master. Ngiphinde ngichaze ukuthi iyiphi i-ajenda ye-transhumanist ebangela lokhu futhi kungani konke kuhlobana nesifiso sokubopha abantu ekuhlanganeni ngokuphelele ne-AI (intelligence yokufakelwa). Kubalulekile ukuthi lo mlayezo uphume. Ngiyethemba ukuzibophezela kwakho kanye negalelo lakho. Thatha inkathazo uthathe isikhathi uvuke ngenkathi usakwazi.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: paulcraigroberts.org, alt-market.com
Amathegi: 2021, 2030, ajenda, EU, afakiwe, isimo sezulu, london, Macron, I-NATO, top, trump, vn
4 December 2019 ku-15: 47
Isihloko esihle futhi uMartin. Izincomo!
Lapha ngicabanga ukuthi izitatimende ezinhle zikaJohan Cruyff ziyasebenza (kule ndaba, ngombono wami):
"Kufanele udubule, uma kungenjalo ngeke uthole amaphuzu."
"Uma ungakwazi ukunqoba kumele uqinisekise ukuthi awulahlekelwa."
"Uma sinalo ibhola, ngeke bakwazi ukuthola amaphuzu."
"Uzoyibona kuphela uma uyibona."
Futhi ngokuqinisekile ngokomqondo akahlobene nebhola ..; )
Dick Klein Oonk wabhala:
4 December 2019 ku-16: 51
Indatshana enhle kakhulu futhi ecacile. Futhi kulabo abangenayo incwadi yakho okwamanje. Ukuthenga!
4 December 2019 ku-19: 11
Ukugezela okubandayo kubekwa phansi njengokubi, kodwa kukuhle kakhulu kuwe. Bengilokhu ngithatha ishawa ebandayo isikhashana futhi ngemuva kwesikhashana iqala ukuzizwa imnandi. Inzuzo eyengeziwe ukuthi ukumelana kuyanda futhi kuba nempilo. Kusebenza futhi ebuchosheni, bondla ngeqiniso. Uzwa kubanda ekuqaleni, kepha uma usudlule kukho uyajabula futhi uhlanzwe.
Kungakho uthola ibhafu elibandayo kimi 😉👍
4 December 2019 ku-21: 36
Lokhu kuzoba ikusasa lakho uma ungabheki emuva ...
5 December 2019 ku-00: 21
Mfundi othandekayo: bhekisisa okuhle ngakuwe eNetherlands futhi ufunde izindatshana zamaviki adlule…
Cishe yisikhathi eNetherlands naseYurophu. Bheka kahle ukuthi kwenzekani. Bheka okuhle impela.
Cha, ungabuki i-TV noma iphephandaba. Baqinisekisa ukuthi awuboni.
Ngiqonde ukuthi: Ukubukeka Okuhle Ngempela.
Funda izindatshana lapha esizeni. Lowo mayelana ne-psycholance, ngokwesibonelo.
ENetherlands kugcwele kuphela kanti nobuchwepheshe bokubona amakamu wedijithali budluliswa igxathu negxathu.
Amakhamera we-Smart, amaplato zamaphoyisa, amakhamera ngaphezu kwayo yonke imigwaqo emikhulu. Ukuqoqwa kwedatha enkulu ..
Bala inani lamakhamera owabona ngosuku.
Amakamu wokufundisa kabusha amaDashi abizwa ngokuthi iMental Healthcare:
> Izilungiselelo ze-GGZ.
> Izikhungo zokunakekelwa kwentsha.
Muhle ngaphandle; ukwethuka ngaphakathi.
5 December 2019 ku-01: 02
Yile ndlela okhishwa ngayo. Lokho kunikezwe igama elimnandi: i-psycholance
5 December 2019 ku-18: 15
Ukuqaliswa kokusebenza kwe-stasis kungaqala
5 December 2019 ku-01: 11
"Isikhwama sokunakekela" se-GGZ sabaphikisi abaphikisayo
5 December 2019 ku-01: 13
Ikamu lentsha lokufundisa kabusha laseDashi. Umuhle ngaphandle, ngokwesabeka ngaphakathi. Bona lezi zithombe zekhamera ezifihliwe:
5 December 2019 ku-01: 25
Funda lapha ubone ukuthi kwenzekani:
5 December 2019 ku-01: 37
Bona ukuthi kuyaphi. Kuyafana ncamashi nokwenzeka eChina:
7 December 2019 ku-00: 12
Ngabe sizophenya ngokushiswa komhlaba manje, kepha leyo akuyona inhloso!
IMerkel iphinde iletha umnikelo wama-60 wezigidi zama-euro (ama-X XUMUM wezigidi).
7 December 2019 ku-13: 15
Ngabe uMerkel uzogubha nini ukuQothulwa Kwesizwe kumaKristu aseRussia enziwe "ngamaKhomanisi." Singalinda isikhathi eside? Nokho, kungenzeka kanjani lokho?
Lokhu uma kwenzeka ngephutha ngesikhathi seMpi Yezwe ye-1. Kulinganiselwa ukuthi okungenani izigidi ezingama-40
AmaKristu abulewe. Ngabe lokhu kufaka nosuku lwesikhumbuzo eNetherlands? Qagela kathathu. Yini abaholi 'bobuKristu' bathule?
10 December 2019 ku-14: 09
O, Vrijland, wenzani manje! Akukubi kangako ngesimo samaphoyisa:
« Ubuchwepheshe be-Smart nokubusa umhlaba wonke kwezobuchwepheshe kuzosindisa isimo sezulu
Esimweni samaphoyisa, ufuna ukuvinjelwa kwamaphoyisa wokuthwebula ukuqhafaza kanye nabahlinzeki "bokusiza" »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.832.036